Baarlamaanka Soomaaliya oo sharci-darro ku tilmaamay go’aankii Qalbidhagax loogu dhiibay Itoobiya – Kalfadhi
Baarlamaanka Soomaaliya oo sharci-darro ku tilmaamay go’aankii Qalbidhagax loogu dhiibay Itoobiya
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta shari-darro ku tilmaamay tallaabadii dowladda Itoobiya loogu wareejiyay Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbidhagax). Baarlamaanka oo kulankiisii caadiga ahaa ku yeeshay Muqdisho ayaa warbixin ka dhegeystay guddi gaar ah oo xildhibaanno ah oo loo xilsaaray dhiibistaas.
Taliska Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dhiibista Qalbidhagax oo la sheegay inuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha ururka ONLF oo la dagaallama dowladda Itoobiya. Warbixin dheer oo uu guddiga soo saaray ayaa lagu xusay in taliska nabadsugidda uu si qaldan u maareeyay kiiska ninkaas iyagoo aan u marin waddo ah, kalana tashan hay’adaha garsoorka ee dalka.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa dood ay warbixinta ka yeesheen kaddib cod u qaaday arrinta. Mudaneyaal gaaraya 152 ayaa oggolaaday, halka lix ay diidday, saddexna ay ka aamustay.
Guddiga baaritaanka sameeyay ayaa laga soo xigtay in markii ay arkeen dastuurradii Soomaaliya tan iyo 1960-kii iyo shuruucda dalka ee arrinta isu-gudbinta eedeysaneyaasha iyo dambiileyaasha, ay u soo baxday in dhiibista Qalbidhagax aan loo marin waddo sharci ah, laguna saleeyay go’aan ku dhisan xog aan sugneyn oo la siiyay madaxda qaranka.
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in baaritaan kaddib ay u soo baxday in caalamka uusan ururka ONLF u aqoonsaneyn argagixiso, siyaasadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana aysan ahayn in ay aqoonsato ama ay gabbaad siiso jabhado iyo ururro hubeysan oo duullaan ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka dalalka kale.
Guddigan baarlamaaniga ah ayaa hay’adaha dowladda kula taliyay go’aamadooda xasaasiga ah inay waafajiyaan dastuurka iyo shuruucda dalka.
Soomaaliya oo beddeleysa danjireyaasha u fadhiya 8 dal
Guddoonka labada aqal ee Barlamaanka oo isku khilaafay shirka baarlamaannada federaalka ah